Ungajoyina kanjani izithombe ezimbili ku-Mac | Ngivela ku-mac
Ungajoyina kanjani izithombe ezimbili ku-Mac
UJordi Gimenez | | I-Mac OS X, Izifundiswa
Namuhla sifuna ukwabelana nawe ngomunye wemisebenzi esingayenza nge-Mac yethu, leyo joyina izithombe ezimbili noma ngaphezulu kalula futhi ngokushesha. Kulokhu kunamathuluzi amaningi nezinketho esinazo ku-Mac yethu ukwenza lo msebenzi, manje sizofingqa ezinye zazo kulesi sifundo.
Kungenzeka ukuthi lo msebenzi usuvele waziwa abaningi benu kodwa kwezinye izimo uzokwenza Kuhle ukwazi amathuluzi noma izinhlelo zokusebenza esinazo kuma-macOS ukujoyina izithombe ezimbili noma izithombe ngqo kumishini yethu.
1 Ungajoyina kanjani izithombe ezimbili ku-Mac
2 Sebenzisa Amakhasi ukuze ujoyine izithombe ezimbili
3 I-Pixelmator Pro, i-Photoshop nezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo nazo ziyasebenza
4 [Ibhonasi] I-Picsew App yamadivayisi e-iOS
4.1 Isetshenziswa kanjani i-Picsew
Njengoba sishilo ekuqaleni, lokhu kungase kubonakale kuwumsebenzi onzima ngempela uma ungawazi amathuluzi osuvele uwafakile kukhompyutha yakho. Futhi ukuthi wonke ama-Mac anikeza inketho yokunamathisela izithombe ezimbili ngaphandle kwesidingo sezinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle.
Into yokuqala efika engqondweni iningi lethu uma sizama ukuhlela isithombe noma isithombe-skrini ukuvula ithuluzi lokubuka kuqala ku-Mac. Le nketho ngeshwa ayinikezi indlela yokuhlanganisa izithombe ezimbili okwamanje ngakho-ke kukhona kancane futhi iya kolunye uhlelo lokusebenza lwendabuko lwe-Apple, Amakhasi. Impela abaningi benu bayamangala ngakho kodwa kuyiqiniso ngokuphelele ukuthi bayindlela elula, esheshayo nephumelelayo yokunamathisela izithombe ezimbili esidingweni sethu esikhulu sezinhlelo zokusebenza zezinkampani zangaphandle.
Sebenzisa Amakhasi ukuze ujoyine izithombe ezimbili
Into yokuqala okufanele siyenze ukufinyelela kuhlelo lokusebenza lwamakhasi, ngoba lokhu uma singenalo singaludawuniloda mahhala ngokuphelele kukhompyutha yethu kusuka ku-App Store. Uma sesiyifakile ku-Mac yethu siyayenza futhi kalula sivula idokhumenti entsha engenalutho.
Manje eqenjini lethu sinesicelo esivulekele ukujoyina lezi zithombe ezimbili, kulula nje hudula ngqo kusuka kudeskithophu yethu noma ukusuka kufolda lapho izithombe zisebhokisini elingenalutho. Uma sesinazo ngaphakathi kohlelo lokusebenza, kufanele silungise izilinganiso futhi kulokhu sizokhetha ngesikhombisi phezu kwesinye.
Bese, uma izilinganiso sezilungisiwe, singagcina ifayela ngezithombe noma izithombe esezivele zinamathiselwe kudeskithophu yethu ngokuqondile noma kufolda esiyifunayo. Lo msebenzi ulula ngempela ngamakhasi, ngakho-ke ekuqaleni sincoma kini nonke sebenzisa lolu hlelo lokusebenza ku-Mac kulokhu neminye imisebenzi eminingi.
Ngingasho ngokwami ​​ukuthi ngisebenzisa leli thuluzi ukuthunga izithombe njengoba ngiyithola ikhululekile futhi isebenziseka kalula, futhi okuhle kunakho konke ukuthi ayilahlekelwa yikhwalithi futhi ingahlelwa ngendlela othanda ngayo. Ngokunengqondo, umsebenzisi ngamunye uhlukile, kodwa kufanele wazi ukuthi ngamakhasi ungakwazi ukwenza lesi senzo.
I-Pixelmator Pro, i-Photoshop nezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo nazo ziyasebenza
Ngokunengqondo, lapho siqala ukubheka emakethe izinhlelo zokusebenza zokuhlela izithombe ukuze uthole inketho yokujoyina izithombe ezimbili, kuba lula kakhulu kithi. Futhi yilokho namuhla kunezinhlelo zokusebenza eziningi ezinikeza le nketho yokuhlela isithombe.
I-Pixelmator Pro ingenye ethandwa kakhulu muva nje phakathi kwabasebenzisi be-macOS ecosystem (neye-iOS) njengoba kunjalo iyatholakala ngentengo enengqondo impela futhi inikeza izinketho eziningi zokuhlela izithombe. Ngokunengqondo lolu hlelo lokusebenza alukona nje ukwenza inyunyana yezithombe ezimbili, futhi lusebenza njengesihleli sesithombe ukuthuthukisa ikhwalithi, ukukhanya, njll. Ngalo mqondo, ukuhlela izithombe usebenzisa i-Pixelmator Pro kungenye yezinto ezihamba phambili zalolu hlobo lwensiza.
Kulokhu isicelo I-Pixelmator Pro inikeza inketho yesilingo samahhala kulabo abafuna ukulanda isicelo. Ungalanda lolu hlelo lokusebenza futhi uzame mahhala kufanele sifinyelele kulo ngqo kusuka kuwebhusayithi yakho noma esitolo sohlelo lokusebenza lwe-Mac uqobo, Isitolo se-Mac App.
I-Pixelmator Pro39,99 €
Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuqaphela ukuthi esikhathini esithile esidlule abanye abasebenzisi babesebenzise ithuluzi Lokubuka Kuqala kwe-macOS ukwenza lo msebenzi wokuhlanganisa izithombe, kodwa bekungelula futhi bekudinga izinyathelo eziningi kakhulu. Ngezinhlelo esinazo namuhla, kulula kakhulu ukwenza umsebenzi nge-Pixelmator Pro, Photoshop noma ngamakhasi omdabu e-macOS uqobo, kunokuwenza mathupha. Ngisacabanga ukuthi iyona ndlela engcono kakhulu uma kufanele wenze lo msebenzi ngesikhathi futhi hhayi ngendlela ephindaphindayo.
[Ibhonasi] I-Picsew App yamadivayisi e-iOS
Kubo bonke abasebenzisa i-iPhone kulolu hlobo lwesenzo, singagqamisa phakathi kwazo zonke izinhlelo zokusebenza ezitholakala ku-Picsew. Sekuyisikhathi eside ngilwazi lolu hlelo lokusebenza futhi lungenye yalezi engizisebenzisa kakhulu ngqo kusuka ku-iPhone noma i-iPad yami. Uhlelo lokusebenza olunomlando omude ku-Apple App Store, ngakho-ke akulona uhlelo olusha olungabangela iziphazamisi noma izinkinga.
Kulokhu isicelo muva nje uthole isibuyekezo esishiya ku-3.8.1 kubo bonke abasebenzisi. Ilungise ezinye izinkinga ezitholwe kunguqulo yangaphambilini kanye nentuthuko eqondile esetshenziswe iviki eledlule, njengokuthunyelwa ku-PDF noma ukuthuthukiswa kokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza.
Isetshenziswa kanjani i-Picsew
Lolu hlelo lokusebenza lulula ukusetshenziswa yinoma yimuphi umsebenzisi olulande ku-iPhone yakhe. Uma isivulwe ngokuqondile umsebenzisi unenketho yoku khetha phakathi kwesithombe sakho ngasinye kusuka kugalariLokhu kungalungiswa kusukela kuzilungiselelo zohlelo lokusebenza, ezingaphelele nhlobo.
Uma izithombe esifuna ukuzijoyina sezikhethiwe, sivele sinikeze inketho evela ngezansi ziqondile noma zivundlile. Uhlelo lokusebenza ngokwalo luzokwenza umsebenzi ngendlela elula futhi ngokuphazima kweso sizobeka isithombe sibekwe eceleni. Sigcina kugalari futhi yikho lokho. Lolu hlelo lokusebenza luzenzakalela ngokugcwele futhi lusenzela umsebenzi. Uma ungomunye walabo abasebenzisa lo msebenzi kakhulu, ngaphandle kokungabaza lolu hlelo lokusebenza lungaba usizo olukhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungajoyina kanjani izithombe ezimbili ku-Mac
I-2nm Mac M4 chip iza engxenyeni yesibili ka-2022 futhi ngeke ize yodwa
Abakwa-LG bethula amamonitha amabili amasha e-4K OLED nge-USB-C